Donald Trump Oo Ka Noqday Go'aankii Ahaa Inuu La Kulmo Kim Jong Un
Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Talaadadii 22/may/2018 warqad uu u diray Madaxwyane Kim Jong Un ku cadeeyay in ayna suuragal ahayn inuu qabsoomo shirkii ay ahayd inuu dhaco 12/jun/2018' isga oo sabab uga dhigay, hadlada cusub ee xanaaqu ku dheehen yahay ee ka soo yeedhaya Kim Jong Un maalmahan danbe, arintaas oo dadka siyaasada wax ka qora ku tilmaameen marmarsiiyo aan aasaas lahayn.
Maxay Tahay Xaqiiqada Dhabta Ah Ee Keentay In Uu Shirku Qabsoomi Waayo
Jawaabta Su'aashan dhowr dhinac ayaa laga eegi karaa oo la dhihi karaa waa sababha ugu waawayn ee shirku u qabsoomi waayay. Mida ugu horaysa waa arin la xidhiidha ayada oo aan la siinin wakhti ku filan in shirku uu dhici karo iyo in kale, waa sidee qaabka uga wanaagsan ee uu shirku ku qabsoomi karo, in meel la isla dhigo qodobada la doonoyo in laga doodo shirka.
Mida labaad, waxaa iska cad in aad loogu kala fog yahay arimaha la doonayo in shirka lagaga doodo, USA waxaa ka go'an ah inuu noqdo waxayaabah la doonayo in lagaga hadlo shirka, kaliaya inay ahaato in Kuuriyada Waqooyi ay sixiixdo inay Hubkeeda Nukliyeerka ah ay sida ugu dhakhsaha badan u burburinayso oo lala maro halkii lala maray Iraq iyo Libya, oo malinba sheeko baraleey cusub loo keeno, halaka Kuuriyada waqooyi ay aaminsan tahay inay tahay dowlad awood mulatari oo baaxad wayn haysta, aana u qalmin aqbalaynina in la yarayso oo loo yeeriyo sida ay wax u dhacayaan, ee diyaar u ah wadahadal iyo in meel dhexe wax la isla dhigo.
Mida Sadexaad, waa in la qiyaasi karo waxyaabah la doonay inuu shirka ka soo baxo, suura galna maha in la maleeyo waxa la filayo in la isku af garto arintan, ayado oo aan si dhab ah loo lafagurin labada arimood ee aan kur ku qeexay.
Isku Soo Duuduub Hada Yaa Khaldan Oo Dhacay Yaase Saxsan Oo Guulaystay
Waxaa arin aad muhiim u ah ah in meel la saaro, shirkan qabsoomi waayay yaa khaladkiisa leh, yaase mudan in lagu abaal mariyo. sida khuburada One Global Network ee ku takhasustay siyaasada heerkan oo kale ah ay shaaca ka qaadeen, Dowlada maraykanaka ayaa ah cida khaladkeeda leh, sababtuna wax kale ma aha, kow kama ayana fiirsanin in shirkan aya diyaar u tahay iyo iyo inkale, waxay rabaan in ay waxa walba ka bilaabaan meeshaa ugu danbaysa oo ay ka boodaan aasaaska, iyo inay shirkii gabigiisaba kansaleen, marka uma baahna in jawaata meelo kale oo fogfog laga baadhbaadho. Dhinaca kale, waxaa mudan in la amaano, Dowlada Kuuriyada Waqooyi doorka geesinamada leh ee ay ka ciyareen arintan xasaasiga ah, kow waxay ogalaadeen in la isa soo hor fadhiisto oo khilaafkan wada hadal lagu dhameeyo, ilaa hada lagama hayo wax eedayn ah oo kaliftay in Dowlada maraykank shirka imaan waydo, ayago oo wali diyaar u ah in shirku wakhtigii la qabtay dhaco.